स्यानिटाइजर कसरी प्रयोग गर्ने ? – KalaiyaOnline.Com
स्यानिटाइजर कसरी प्रयोग गर्ने ?
सबैभन्दा उत्तम उपाय साबुनपानीले हातधुनु हो । त्यसो त, कोरोना भाइरस जोखिम बढेस“गै स्यानिटाइजर प्रयोग पनि बढेको छ । तर, स्यानिटाइजर भनेकै अल्कोहलको एकप्रकारको रुप हो । अल्कोहलले कहिलेकाही“ छाला सुख्खा, रातो बनाइदिने र पोल्ने हुनसक्छ । यसबाट एलर्जीसमेत हुनसक्ने सम्भावना छ ।
कोरोना महामारीका बेला स्यानिटाइजर प्रयोग नगरे पनि नहुने अवस्था छ । पछिल्लो समय जहाँ देखे पनि स्यानिटाइजर प्रयोग गरिहाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हात, अनुहारमा पनि लगाउने गरिएको छ ।
साबुनपानीको पहुँच नभएको अवस्थामा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्यानिटाइजर गलत प्रयोगले अनावश्यक जोखिम निम्त्याउन पनि सक्छ । छालामा मात्रै होइन, आँखा, ओठ र अनुहारमा पनि असर गर्न सक्छ ।
त्यस्तै, शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि असर गर्न सक्छ । कतिपयले त खाने अल्कोहल भनेर पिएको अवस्था पनि छ । कुनै पनि स्यानिटाइजरमा ६० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा नपुगेसम्म व्याक्टेरिया, भाइरस मार्ने क्षमता हुँदैन । अथवा, स्यानिटाइजरमा अन्य तत्व नपुगेको पनि हुनसक्छ ।
बजारमा पाइने केही स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन पनि रहेको सुनिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले स्यानिटाइजरको गुणस्तर सन्दर्भमा नियमन र अनुगमन गर्न जरुरी छ ।
स्यानिटाइजर प्रयोग सबैभन्दा बढी हातमा हुन्छ । एकपटकमा ‘कति स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने ?’ भन्ने छैन । स्यानिटाइजर समुचित प्रयोग गर्न जरुरी छ ।
स्यानिटाइजर हातमा दलेरमात्रै हुँदैन । औंलाबीच, नङको काप, हातपछाडि भाग सबैतिर लगाउँदा राम्रो हुन्छ । गुणस्तरयुक्त स्यानिटाइजर रहेछ भने यसरी लगाउँदा व्याक्टेरिया, भाइरस मर्छन् । र, रोगबाट लड्न सहयोग पुग्छ ।
डा. श्रेष्ठ मेडिसीटी अस्पतालमा कार्यरत यौन तथा छाला रोग विशेषज्ञ हुन् ।